COVID-19: Qiyaastii 23.8 Million Carruur ah oo Badan ayaa Ka Baxi Doonta Dugsiga - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
August 23, 2020 Warar & Muuqaal 0
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, ilaa 23.8 milyan oo carruur iyo dhallinyar dheeri ah oo dheeri ah (laga bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacadda) ayaa laga yaabaa inay iskaga tagaan ama aysan u helin iskuul sannadka dambe sababo la xiriira saamaynta dhaqaale ee COVID-19 keliya. Amaah: Umer Asif / IPS
(Waxaa daabacay: Adeegga Saxaafadda Inter, Ogosto 7, 2020)
Waxaa Qoray Samiira Sadeque
Qiyaastii 23.8 milyan oo carruur iyo dhallinyarro dheeri ah (laga bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacadda) ayaa laga yaabaa inay ka baxaan ama aysan u helin iskuul sannadka dambe sababo la xiriira saamaynta dhaqaale ee masiibada keliya.
UNITED NATIONS, Aug 7 2020 (IPS) - Wadamada horumarka aadanaha hooseeyo waxay wajahayaan culeyska ugu weyn ee iskuulka laga xiro, iyadoo in ka badan 85 boqolkiiba ardaydoodu si wax ku ool ah uga maqnaan doonaan dugsiga marka la gaaro rubuca labaad ee sanadka 2020, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ay soo saartay Qaramada Midoobay. saameynta COVID-19 ee waxbarashada.
Markii ugu horeysay ee la daahfurayay, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres, wuxuu sheegay in aafada "ay horseedday carqaladeyntii ugu weyneyd ee waxbarasho abid."
Sida ku xusan qoraalka kooban, xiritaanka iskuulka ee ka dhashay aafada ayaa saameysey 1.6 bilyan oo arday oo wax ka barta in ka badan 190 dal.
Boqortooyada Midowday, farqi ayaa u dhexeeya waxa saameeya ardayda iyo waxa saameeya waalidiinta iyo macallimiinta., Sida ay sheegtay borofisar Anna Mountford-Zimdars, oo bare ka ah dhaqdhaqaaqa bulshada ee Jaamacadda Exeter. Maaddaama ardayda ay hadda u socdaan iskuulada meel fog, ayay tiri, waalidiinta, macallimiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah waxay mudnaanta siinayaan arrimaha sida amniga, fayoobaanta iyo nafaqada - ma ahan guulihii waxbarasho. Si kastaba ha noqotee, ardaydu "aad ayey uga walaacsan yihiin helitaankooda iyo horumarkooda iyo sida ay taasi u saameynayso mustaqbalkooda mustaqbalka".
Mountford-Zimdars ayaa la hadlay IPS ka dib markii la sii daayay warbixinta kooban ee Qaramada Midoobay. Bishii Maajo, xafiiskeeda Jaamacadda Wadajirka ah ee Xarunta Dhaqdhaqaaqa Bulshada ayaa daabacday natiijooyinka sahan ku saabsan sida xirnaanshaha dugsiyadu u saameynayo waalidiinta iyo ardayda ku nool Boqortooyada Ingiriiska oo dhan.
Mountford-Zimdars ayaa u sheegay IPS Talaadadii “Ardayda waxay soo wariyeen dareen ah 'luminta awooda' marka loo eego qaabeynta talaabooyinkooda xiga sida qaabka hanashada iyo fursadaha waxbarashada sii socota.
Sida ku cad qoraalka kooban, "ilaa 23.8 milyan oo carruur iyo dhallinyar dheeri ah oo dheeri ah (laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacadda) ayaa laga yaabaa inay ka tagaan ama aysan u helin iskuul sannadka dambe sababo la xiriira saamaynta dhaqaale ee masiibada kaliya".
Faafida ayaa ka sii daraysa dhibaatooyinka horey uga jiray berrinka, taasoo caqabad ku ah barashada dadka ku nool meelaha saboolka ah ama miyiga, gabdhaha, qaxootiga, dadka naafada ah iyo dadka sida qasabka ah loo barakiciyay.
Nidaamyada waxbarasho ee ugu nugul, carqaladeynta sannad-dugsiyeedka waxay saameyn aan fiicnayn ku yeelan doontaa ardayda aadka u nugul, kuwaa oo shuruudaha lagu hubinayo sii-wadashada barashada guriga ay ku kooban tahay, ”ayaa lagu yiri qoraalka kooban.
Waxay tilmaamtay in gobolka Saaxil uu si gaar ah ugu nugul yahay saameynta qaar maadaama qufulka uu yimid markii iskuulo badan oo kuyaala gobolka horay loo xiray sababo laxiriira arrimo badan sida amniga, shaqo joojinta, walaaca cimilada.
Sida lagu sheegay warbixinta, 47 boqolkiiba carruurta 258 milyan ee dunida ee aan iskuul dhigan (30 boqolkiiba sababo la xiriira colaadaha iyo xaaladaha degdegga ah) waxay ku noolaayeen Saxaraha ka hooseeya Afrika ka hor inta aan la helin faafitaanka.
Dhanka kale, iyadoo carruurtu ay hadda guriga ku sii jiraan waqti buuxa waxay u noqon kartaa caqabado waalidiinta, waxayna sii murjin kartaa xaaladda dhaqaale ee waalidiinta, oo ay tahay inay xal u helaan si ay u bixiyaan daryeel ama u magdhabaan luminta cuntada iskuulka.
Tani waxay ku jirtaa natiijooyinka Mountford-Zimdars sidoo kale. Waxay u sheegtay IPS in cilmi baaristooda ay muujineyso in waalidiinta ay u arkaan xaalada taagan inay tahay "iskuul dhibaato" oo aysan aheyn "waxbarashada guriga" ama waxbarasho fog.
Waxaa jira, si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah maro lacag ah. Markii ay la kulmeen aafada iyo qufulka, hay'adaha waxbarashadu waxay ku jawaabeen "hal abuur cusub" si wax looga qabto farqiga, warbixinta kooban ayaa lagu yiri. Waxay sidoo kale siisay barayaasha fursad ay ku milicsadaan sida nidaamyada waxbarashadda ee horay u socda ay u noqon karaan “kuwo dabacsan, sinnaan leh, oo loo dhan yahay.”
COVID-19 waxay barayaasha siisay fursad ay kaga fekeraan sida nidaamyada waxbarashadda ee horay u socda ay u noqon karaan “kuwo dabacsan, sinnaan leh, oo loo dhan yahay.”
Mountford-Zimdars ayaa sheegay in sahamintoodu si gaar ah u muujisay in ardayda leh baahiyaha waxbarashada gaarka ahi ay "ku sii kobcayaan wax ku barashada khasabka ah ee guryaha-ka-badan marka loo eego iskuullada caadiga ah."
“Waxaa jira casharro laga baranayo waxyaabaha keenaya in waxbarashada-hoyga-guriga ay noqdaan xulasho wanaagsan oo carruurta qaar ah - oo ay ku jirto fursadda ah in waxyaabaha la waafajiyo danaha shaqsiyadeed iyo baahidooda, nasashada iyo wada-raaxeynta qoys ahaan,” ayay tiri.
Iyada oo qireysa in inta badan dugsigu u yahay meel badbaado u ah carruur badan, ayay raacisay, “Waxaan sidoo kale u baahanahay in aan aqoonsanno in ay jiraan khibrado kaladuwan oo xiritaanka iskuulka ah iyo sidoo kale in ay jiraan carruur iyo qoysas kuwaas oo u arka inay tani tahay fursad ay dib uga fikiraan sida iyo sababta ay u yihiin Iskuulada u dhigta sida ay yihiin. ”
Qoraalka kooban ee Qaramada Midoobay wuxuu sii falanqeeyay talaabooyinka lagu xisaabtamayo talaabooyinka horay usocda - ha ahaato dib ugu noqoshada fasalada ama hagaajinta barashada dhijitaalka. Qoraalku wuxuu ku talinayaa xalalka loogu talagalay arrimaha ku saabsan isku xirnaanshaha carruurta ee loo siman yahay iyo sidoo kale in laga dhigo casharadii ay lumiyeen.
Mountford-Zimdars waxay liiskan ku darsadeen laba cunsur oo muhiim ah: meel aamin ah oo ay ardayda kula wadaagaan khibradooda guriga, iyo milicsiga sida ay uga shaqeeyeen aafada.
“Waa muhiim in la abuuro goobo amaan ah oo dhalinyarada looga sheekeysto waaya-aragnimadooda ku saabsan waxbarashada guriga,” ayay tiri, iyadoo raacisay in arday badan aysan u noqon waayo aragnimo wanaagsan, sababo la xiriira duruufaha qoyska, la'aanta helitaanka nafaqada , ilaha dhaqaalaha, bulshada ama dhaqanka iyo tikniyoolajiyadda.
"Hadda waa fursad aan ku siino meelo looga hadlo khibradahaas, haddii loo baahdana, waxaan ku siinayaa taageero takhasus dheeraad ah," ayay raacisay. "Waxay faa'iido weyn u leedahay in taageerada caafimaadka dhimirka la helo, si weyn loo xayaysiiyo, loona furo is-gudbinta dhalinyarada lafteeda iyo kuwa iyaga kala shaqeeya iskuulada."
Intaas waxaa sii dheer, ayay tiri, waalidiinta iyo macallimiintu waa inay ku hagaan ardayda inay ka fekeraan casharrada wanaagsan ee laga helo xiritaanka dugsiga.
“Waxaan si adag ugu talin lahaa intii aan diirada saari lahaa uun luminta barashada manaahij gaar ah, in dib loo furo iskuulku wuxuu u baahan yahay in lala socdo muddo fikir ah. Maxay ardaydu barteen? Sidee tani waxtar u leedahay mustaqbalka? ” ayay raacisay.
La Qabsashada Ka Qayb Qaadashada Xagjirnimada: Tallaabooyinka Ficil ahaaneed ee Abuuritaanka Meel Dhex-dhexaad ah, Syllabus-Dhex-gal
Specter of Nuclear War: Maxay Dunida ugu Nooshahay Hooskeeda
Dhaqanka Nabadda: U beddel adduunkeenna sidii ugu wanaagsanayd xilligii COVID 19
September 25, 2020 opinion, Dhalinta diirada la saaray 0
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan xushmeyney Sannad-guurada 20aad ee Bayaanka 1999 ee Barnaamijka Waxqabadka ee Dhaqanka Nabadda. Maanta, waxaan u baahanahay inaan isweydiino haddii aan si dhab ah u gudanay waajibaadkeena anshaxeed si aan uga gudubno dhaqan nacayb iyo rabshad una gudubno dhaqan dulqaad iyo nabad. [sii wad akhriska…]
Buuggooda 'Alps-Adriatic Manifesto': Siyaasad cusub oo loogu talagalay Post Post COVID World
July 19, 2020 CV, Warar & Muuqaal 0
Isku xirnaashaha 'Corona Connena' wuxuu soo bandhigayaa Manifesto Alps-Adriatic Manifesto, oo ah cadeynta iskaashiga xuduudaha xuduudaha gobolka iyo ujeedka shacabka. Manifesto-kan ayaa dejinaya "yoolalka iyo geeddi-socodka ka-gudbidda kala-soocidda iyo ka-fogaanshaha ee musuqmaasuqaya fursadaha nabadeed ee qaababka hadda jira." Waxaan la wadaageynaa Manifesto sida qaab dhismeedka barasho ee ku habboon aragtida guud ee nabadda iyo waxbarashada dhalashada adduunka. [sii wad akhriska…]
Waxaan ubaahanahay qaab caafimaad bulshada guud ee istiraatiijiyada amniga qaranka
April 17, 2020 Warar & Muuqaal 0
Dhanka istiraatiijiyadda amniga qaranka, COVID-19 wuxuu albaabka u furayaa isbadal suurtagal ah oo loo wajaho habka caafimaadka bulshada iyo habka loo horumariyo istiraatiijiyadda amniga. Tani waxay noo saamaxaysaa inaan aragno in waxyeelada xuduudaha, burburka, iyo rabshadaha ay la mid yihiin cudur faafa. [sii wad akhriska…]